जुन ४ र तियानमेन स्क्वायर - Hatuwa Herald Hatuwa Herald
जेष्ठ २२, २०७६ बुधबार
जुन -४ सन् १९८९ मा तियानमेन स्क्वायरमा के भएको थियो ?
१० अप्रिल १९८९ मा लाखभन्दा बढी प्रदर्शनकारी स्वतन्त्रताको माग गर्दै तियानमेन स्क्वायरमा भेला भएका थिए । चीनको वामपन्थी शासनको इतिहासमा भएको यो सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन मानिन्छ । यो आन्दोलन ६ हप्तासम्म चलेको थियो । तत्कालीन समयमा सोभियत संघ ढल्ने अवस्थामा पुगेर संसारभर कम्युनिस्टहरुको पकड गुम्दै गएका बेला चीनमा पनि कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भए पनि त्यसले सफलता पाउन सकेन ।
उनीहरुले कम्युनिस्ट शासनको अन्त्य र लोकतन्त्रको माग गरेका थिए । सो आन्दोलन देशका अत्य सहर र विश्वविद्यालयमा समेत फैलिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा उनीहरुले बढ्दो महँगी र कम तलब लगायतका विषय समेत उठाएका थिए ।
३ जुनको राति सुरक्षा फौज ट्यांकर सहित तियानमेन स्क्वायर पुग्यो र त्यहाँ आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्दा करिब १ हजारको संख्यामा मानिसहरु मारिए भने थुप्रै घाइते भएका थिए ।
चीन सरकारले यो घटनामा कोही नमारिएको बताएको थियो । यो घटनाको स्मरणमा चिनमा कुनै कार्यक्रम पनि गरिँदैन । हरेक वर्षको ४ जुनले यो घटनाका पीडितहरुको घाउ चर्काउने गर्छ ।
चीन सरकारले सो घटनालाई कहिल्यै पनि आधिकारिक मान्यता दिएन र यसबारे सार्वजनिक रुपमा केही बताउने गरेको छैन । यो घटनालाई चीनमा कतै दस्तावेजीकरण गरेको पनि पाइँदैन ।
तर, चीनका रक्षामन्त्रीले भने यो बिषयमा हालै पहिलो पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै सरकारको बचाउ गरेका छन् । रक्षामन्त्री तथा सैनिक जनरल वेई फेङ्गेले एक क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलनका क्रममा त्यसबेला बढ्दो अशान्ति रोक्न तत्कालीन सरकारले अपनाएको नीति सही भएको बताएका छन्, ‘आज पनि मानिसहरु किन ३० वर्षअघि फर्किन्छन्, त्यो समयमा वामपन्थी पार्टीको नेतृत्वमा चीनमा ठूलो परिवर्तन आयो, त्यसपछी देश स्थिरता र विकासको मार्गमा अघि बढेको छ,’ रक्षामन्त्री वेई फेङगले सिंगापुरमा भएको व्यापार र सुरक्षासम्बन्धी क्षेत्रीय मञ्चमा भने, ‘तपाईंहरुलाई ४ जुनको घटना सम्हालेर देशमा स्थिरता कायम गर्नु चीन सकारको गल्ती थियो जस्तो लाग्छ ? सरकारले अशान्ति रोक्नका लागि निर्णायक कदम उठायो, यो सही नीति थियो ।’
(हत्तेरी डटकमको सहयोगमा)